Haweenka iyo Shukulaatada: Wax ka ogaw Lix arrimood oo la xiriira - BBC News Somali
Haweenka iyo Shukulaatada: Wax ka ogaw Lix arrimood oo la xiriira
Haween badan ayaa jecel shukulaatada, macmacaanka iyo waxyaabaha laga sameeyo. laakiin waxaa la dhexgeliyay arrimo badan oo khuraafaad iyo xan ku saabsan.
Sida khubaro ay sheegeen, waxaa ku jiro arrintan oo xiriir la leh in haweenku ay doorbidaan shukulaatada oo balwad ay u tahay cunitaankeeda.
Balse xaggee ka yimaadeen fikradaha noocan ah? Sidee lagu ogaaday in haweenku qabatimaan shukulaatada? Sidee shukulaatada u noqotay wax cuniddeeda lagu raaxaysto?
Fikradahan ayuu iftiimiyay Barnaamijka Haweenka ee BBC-da ee Radio 4. Waxaa ka qeybgalay aqoonyahanno iyo khuburo.
Waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa macluumaad la yaab leh oo lagu soo bandhigay barnaamijkaasi:
1- Waa quraafaad in haweenka aad ay jecel yihiin shukulaatada marka ragga la barbardhigo
Dr. Kathryn Janson Boyd, oo ah hormuudka cilmu-nafsiga ee Jaamacadda Anglia Ruskin ee Britain ayaa tiri: "Ma jirto wax caddeyn ah oo muujinaya in dumarka ay ka jecel yihiin shukulaatada ragga."
Cilmi baaris la sameeyay ayaa dhowaan lagu ogaaday in arrintan ay u badan tahay mid ka dhalatay saameyn iyo caado bulsheed.
Dr. Boyd waxay tiri: "Waxaan ku qanacsanahay in macluumaadka ah in dumarku ay shukulaatada aad u jecel yihiin, iyo inay faa'iido u leedahay haweenka, ay dhammaan yihiin macluumaad aan sal iyo raad toona lahan."
Maskaxdaada ka caawi in aysan waxba illaawin adigoo cunaya khudaartan
Sue Quinn, oo ah qoraaga buugga Coco ee Baarista Shukulaatada, ayaa dhankeeda sheegtay: "Dadka waxay aad ugu riyaaqayeen cunista shukulaatada, kumanaan sano ka hor, oo qaar waxay u isticmaalayeen daawo ahaan. Waxaa la siin jiray askarta marka ay dagaalka aadayaan iyo haweenka xilliga dhalmada si ay uga caawiso foosha.
2- Shakiga ah in Shukulaatad ay dumarka waasho
"Qarnigii 18-aad, dhakhaatiirtii xilligaa waxay shukulaatada u aaneyn jireen in ay sababto xanuun dhanka maskaxda ah," Sue Quinn ayaa u sheegtay barnaamijka BBC ee Woman's Hour.
"Sheekooyiinka uu qoray mid ka mid ahaa wadaadadii masiixiyiinta, ayaa ka hadlaysa in koox dumar ah oo la qabatimay cunidda shukulaatada ay iska dhaga tireen baaq uu u jeediyay wadaadkii kaniisadda oo ku amray in inta kaniisadda lagu jiro ay joojiyaan cabideeda," ayey tiri.
haween ku sugan beeraha laga soo saaro kookaha
3- Boqolkiiba 68% shaqaalaha beeraha kookaha waa haween
"Sida caadiga ah, waxaan marar badan aragnaa haweenka oo qayb ka ah xayeysiimaha kookaha iyo shukulaatada, loona arko macaamiil.
"Balse inta badan uma maleyno in haweenka ay dhab ahaantii yihiin qayb muhiim u ah wax soo saarka shukulkaatada - laga bilaabo abuurka kookaha ilaa warshadaha shukulaatada," ayay tiri Emma Robertson, oo ah macalin cilmiga taariikhda ka dhigta Jaamacadda La Trobe.
"Waxaan u maleynayaa in ay jirto aragti ah in beeraha ay inta badan ka shaqeeyaan ragga, laakiin markaad dumarka waydiiso, waxaad ogaaneysaa in shaqooyiin badan ay beeraha ka qabtaan."
4. Haween ka shaqeeya beeraha kookaha waxay qaataan lacag ka yar tan ragga
"Haweenka waxay ka mushahar yar yihiin ragga markay qabtaan shaqooyin badan," ayuu yiri Dr. Nyagoy Nyong'o, oo ah madaxa shirkadda Fairtrade.
"Kuwa mushaarka qaata, waxay mushaar ahaan u qaataan wax ka yar $32 dollar maalintiiba, taas oo aad uga hooseysa heerka saboolnimada, waxayna shan jeer ka yartahay waxa ragga ay qaatan."
5. Shukulaatada waxaa soo saari jiray dadkii la adoonsaday
Mar walbo oo ay Emma Robertson daraasad ka sii sameyso shukulaatada, waxay wax badan ka sii ogaaneysaa in ay tahay "mid sheekooyiinkeeda ay la xiriiraan boqortooyooyiin hore".
"Warshadaha shukulaatada ee Britain waxay ku tiirsanaayeen waxyaabaha ceyriinka ahaa ee ka imaan jiray dalalkii ay Britain gumeysan jirtay, si gaar ah dalalka Galbeedka Afrika, sida Nigeria iyo Gaana," ayay tiri Emma.
Waxay intaas ku dartay: "Xitaa bilowgii qarnigii labaatanaad, waxaa jiray fadeexad ahayd in shirkadaha shukulaatada sameeya ee Britain ay ka iibsanayaan kookaha suuqa furan, wuxuuna ahaa kookaha laga soo saaro dalalkii uu Burtuqiiska gumeysan jiray ee Galbeedka Afrika.
"Howsha beerahaas waxaa lagu qabtay dad la 'adoonsaday' - taas oo ah in ay si bilaasha ah ku shaqeeyeen. Waxay ahayd nooc ka mid ah addoonsiga dhinac walba."
6- Shukulaatada madow iyo caafimaadka
Sue Quinn waxay tiri: "Shukulaatada madow ayaa caafimaad badan, maadaama ay ku jirto sonkor yar, waxaana aad ugu badan maadooyiin kale oo waxyeelo u geysan kara qofka. Marka ha cunin wax badan."
Waxay xustay: "Kookaha waa walax isku-dhafan oo ka kooban maadooyiin leh faa'iidooyin caafimaad oo aad u weyn, laakiin waxaa jira caddeyn ah in qaar ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay ay hoos u dhigi karaan cadaadiska dhiigga iyo sidoo kale halista wadno-xanuunka."
Caafimaad: Maxaan ka naqaanaa cuntooyinka sare u qaadi karo hammada?
6 Jannaayo 2022
Gambadhkii Amiir Cabdullaahi B. Cabdishakuur [1885-1887]
6 Disembar 2020